सविताले जितिन् पाँच स्वर्ण
Fri, Oct 20, 2017 शुक्रवार, कात्तिक ३, २०७४
अन्नपूर्ण शुक्रवार, फागुन ६, २०७३ 4190 पटक पढिएको
ताप्लेजुङः राष्ट्रपति रनिङ सिल्डअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को छनोट प्रतियोगिताको उपाधि कञ्चन एकेडेमीले जिते पनि सदरमुकामभन्दा करिब ४५ मिनेटको दुरीमा रहेको जनता माविकी एक किशोरी प्रतियोगिता अवधिभर सबैको चासोको विषय बनिन् । बिहीबार सम्पन्न चारदिने प्रतियोगितामा जनता मावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत सविता कार्की एक्लैले ट्र्याक एन्ड फिल्डका विभिन्न पाँचवटा स्पर्धामा स्वर्ण पदक जितेर गतिलै चर्चा बटुलिन् । उनले एक सय मिटर दौड, हाइजम्प र ट्रिपलजम्पको व्यक्तिगत स्पर्धामा स्वर्ण हात पारिन् ।
यसैगरी एक सय गुना चार र चार सय गुना चार मिटर रिले दौडमा पनि उनले टोलीका अन्य सदस्यसँग मिलेर स्वर्ण पदक जितिन् । आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण उनी छात्रातर्फको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी पनि घोषित भइन् ।
प्रतियोगिताको समापन समारोहमा एकपछि अर्को गर्दै पाँचवटा स्वर्ण पदक थापेपछि निकै प्रफुल्ल देखिएकी सविताले यो सफलताबाट आफू निकै उत्साही भएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘मलाई निकै खुसी लागेको छ । अब अझ राम्रो तयारी गरेर जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा सहभागी हुन्छु’, उनले भनिन् ।
प्रतियोगितामा पहिलो स्थान हासिल गरेको फुङलाङस्थित कञ्चन एकेडेमीले कुल एक सय ५३ अंक जोडेको थियो । यसैगरी दोस्रो भएको हाङदेवास्थित जनता माविले एक सय १५ अंक बटुल्यो । भलिबलमा कञ्चन माविका छात्र राजन लिम्बू सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । कबड्डीको छात्रमा कञ्चन माविका स्टेफन मगर र छात्रामा पनि सोही माविकी सरिता राई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बने ।
चीनले गरेको विश्वकै ठूलो राजनीतिक प्रयोग
राम राज्यको प्रतीक तिहार 1906
घरघरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिँदै 5302
मनमा पनि बलोस् दियो ! 2429
दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज अन्‍योलमा 5313
को बन्ला मुख्यसचिव ? 12785
मन्त्रीको डेरामै करोड खर्च 3256
सी जिनपिङका पाँच वर्ष: व्‍यक्तिगत अधिकार बढ्‍यो, देशको लागि खतरा 21421
यसरी छानौं तिहारमा शुद्ध खानेकुरा 2059
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेशको राजधानी 3536
सुर्खेत र जाजरकोटको सीमाना कालिखोलामा बस दुर्घटना : एकको मृत्यु 392
मोटरसाईकलको ठक्करबाट वृद्धको ज्‍यान गयो 809
नेवार समुदायको मौलिक पर्व म्हःपूजा 2126
जंगली हात्तीको बथानले घर भत्कायो 575
भारतीय सीमा सुरक्षाबलद्वारा खेत जोत्नमा रोक 21812
तस्बिरमा लक्ष्मीपूजा र दीपावली 1952
टेलिकमले कात्तिकभर नि:शुल्‍क यूसिम बाड्‍ने 28947
प्रविधि पत्रकार मञ्‍चको अध्‍यक्षमा रेग्मी सर्वसम्‍मत 975
अब ट्‍वीटरमा दुई सय ८० शब्द लेख्‍न सकिने 1274
सगुनमा दोस्रो चरणको लगानी नोभेम्वर ३० सम्म 1213
पीओएस मेसिनको प्रयोग बढ्यो 5538
डेढ करोड मोबाइल आईएमईआई दर्ता 4489